Bhanga reCABS Ronyima Zvikwereti veChidiki Vasina Magwaro Akati Tsvikiti
Vechidiki vakawanda munyika vari kugunun’una nebhanga reCABS iro vanoti riri kunonoka kana kutadza kuvapa zvikwereti zvekuti vatange mabhizimusi pasi pehomwe yeOld Mutual yemamiriyoni gumi emadhora.
Ukuwo bhanga iri rinoti vechidiki ava vari kukundikana zvikuru kunyora magwaro ekutsvagira mari zvirongwa zvavanenge vachida kutanga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Youth Council, VaLivingstone Dzikira, vakaudza neChina komiti yeparamende inoona nezvekupa masimba munyaya dzehupfumi kuvatema, kuti bhanga iri, iro rakanzi rigove mari iyi riri kutora nguva kuongororora magwaro evechidiki ekuti vapihwe zvikwereti.
Vakakumbirawo paramende kuti ione zvaingaite kuitira kuti mari iyi igoverwe nebhanga reCommercial Bank of Zimbabwe iro vakati rinoita basa nekukasika.
Mumwe wechidiki akanzi haakwanisi kuwana mari pabhizimisi raida kutanga, Jeffrey Moyo, anoti zvechokwadi banga reCABS riri kutadza kubatsira vechidiki.
Anoti aida kuvhura imba yekudyira muHarare asi akanyimwa mari uyewo haana kupihwa chikonzero chekuti chii chaangaite kuti akwanise kupihwa chikwereti.
Asi mukuru weCABS, VaKevin Terry, vanoti vechidiki vazhinji munyika vari kutadza kuwana zvikwereti kubhanga ravo, nekuti vari kutadza kunyora magwaro, kana kuti business proposals anoita kuti vawane mari iyi.
Vachitaura pamberi pekomiti imwe cheteyo, VaTerry vakatiwo magwaro evazhinji vakanyorera kuti vanoda mari anoratidza kuti havana ruzivo rwekuita zvemabhizimisi.
VaTerry vakati kubvira pakatangwa chirongwa ichi muna Mbudzi gore rapfuura, pane vechidiki vashoma vakawana zvikwereti.
Vakati bhanga ravo riri kupa zvikwereti zviri pasi kana kudarika zviuru zvitatu nemazana mana emadhora.
VaTerry vakati nekuda kwekuti vechidiki ava havasi kuziva zvinodiwa kuti vawane mari yechikwereti kuti vatange mabhizimisi, vave kuti vese vanenge vatadza kubudirira, vaende kunodzidziswa zvekuita mabhizimisi kubazi revechidiki.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuendesa hupfumi kuvatema, VaTongai Matutu, vanoti nyaya yekuti vechidiki vari kutadza kuwana zvikwereti kumabhanga akaita seCABS, idambudziko rebazi ravo uye vari kurigadzirisa.
Kambani yeOld Mutual yakaisa parutivi mamiriyoni gumi emadhora semari yekubatsira vechidiki kutanga mabhizimisi pasi pechirongwa chehurumende chekupa masimba kuvatema. Chirongwa ichi chinosungira kuti makambani ekunze ape zvikamu zvehupfumi makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema vemuZimbabwe.
Mari iyi iri kupihwa vechidiki pachishandiswa bhanga reCABS iro rinove rimwe remakambani ari pasi peOld Mutual.